हेटौंडा, ७ असार – आफ्नै ढुङ्गा खानी रहेको दावी गरेर प्रचारवाजी गरी ग्राहकलाई भ्रममा पार्दै आएको शिवम् सिमन्ट उद्योगका कर्तुतहरु बाहिर आएका छन् ।
हेटौडामा उत्पादित सिमेन्ट र रेडिमिक्स कंक्रिट दुवै ग्राहकले पत्याएका बस्तु हुन् । विभिन्न स्किम, उपहार र अधिक प्रचार प्रसारका कारण शिवम् सिमेन्ट जर्वजस्त ढंगबाट परिचित व्राण्ड सिमेन्ट बनेको हालैको एक घटनाबाट प्रमाणित भएको छ । यो खबर आजको यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिक पत्रिकामा प्रकाशित छ।
शिवम्को रेडिमिक्स कंक्रिट (आरएमसी) पनि जनविश्वास बटुल्दै गरेको नयाँ सेवा हो । केहि वर्ष अघिवाट पोखरामा सेवा सुरु गरेका आरएमसी कम्पनीहरुले गुणस्तरीय निर्माणमा ग्राहकको मन जितेका छन् ।
तर, पछिल्ला केहि घटनाहरुले यि दुवै वस्तुप्रति शंका उब्जाएको छ । व्यापक प्रचार प्रसारबाट जवर्जस्त स्थापित शिवम्् सिमेन्टप्रति आरएमसीका सञ्चालकले लगाएको किटानी दोषलाई नमान्ने कसरी ?
सेभेन लेक आरएमसी एण्ड हाउजिङ कम्पनीका सञ्चालक विकास गुरुङले लगाएको आरोपलाई महानगरका इञ्जिनियर सुरेन्द्र पौडेलले पनि समर्थन गरेका छन् । उनीहरुले सिमेन्टको कमजोरीले काममा बाधा उत्पन्न भएको दावी गर्दै आएका छन् ।
‘क्वालिटीको मामलामा नो कम्परमाइज’ यो नारा शिवम् सिमेन्टको हो । उसले करोडौ रुपैयाँ विज्ञापन र वजार प्रवद्र्दनमा खर्च गरेको छ । तर, उसकै उत्पादनमा कमजोरी भेटिएको छ । ३ घण्टा भित्र सेट भइसक्नु पर्ने रेडिमिक्स कंक्रिट १४ घण्टा सम्म नजमेपछि डोजर लगाएर नजमेको माल फाली नयाँ आरएमसी बनाएर पुनः ढलान गर्नु परेको घटनाले शिवम्को शाख गिरेको छ ।
शिवम् सिमेन्टको योभन्दा ठूलो कमजोरी के हुन सक्छ ?
घटना हो पोखरा–९ नयाँबजारको । नमुना टोल शान्ति दर्शनमार्गमा २०७५ जेष्ठ २७ गते ढलान गरियो । तर, विडम्वना १४ घण्टा सम्म पनि बाटोको ढलान जमेन । जेष्ठ ३० गते ढलान गर्ने कम्पनीलाई बोलाइयो । ढलानमा जस्तो मिक्स्चर हालेको त्यस्तै पाइयो । ३ घण्टामा ढलान जमिसक्नु पर्नेमा १४ घण्टा सम्म पनि नजमेपछि ढलान गर्ने कम्पनीले आफूले विच्छाएको सबै कच्चा पदार्थ बाटोबाट उठाएर फिर्ता लग्यो ।
लोकल मिकस्चरले गरेको ढलानको गुणस्तर राम्रो नहुने भन्दै महंगो पैसा हालेर आरएमसी हाल्नेहरुले अव गम्भिर भएर सोच्नु पर्ने बनाइदिएको छ । यो घटनाले बढी पैसा हालेर लिने सेवाको गुणस्तर र विश्वसनियतामा प्रश्न उव्जाएको छ । कम्प्युटर प्रणालीवाट मेटेरियरल मिक्स गर्ने र राम्रोसँग घोलिने हुँदा संरचना निर्माण बलियो र टिकाउ हुने जनविश्वास रहि आएकोमा नयाँ वजार बाटो ढलान प्रकरणले आरएमसी मेटेरियलको गुणस्तरप्रति गंभिर भएर सोच्न बाध्य पारेको छ । प्रतिघन मिटर ११ हजार पाँच सयका दरमा किनिएको आरएमसी ढलान किन जमेन ? कस कसको के कमजोरी छ ? यस बारेमा युनाईटेड पोष्टले खोज्ने प्रयास गरेको छ ।
सेभेन लेक आरएमसी एण्ड हाउजिङ प्रालिका सञ्चालक विकास गुरुङ जेष्ठ ३० गते बाटो ढलान विग्रिएको ठाउँमा भेटिए । कसरी आरएमसी जमेन भन्ने प्रश्नमा गुरुङले भने–‘सिमेन्टको कारण जमेन ।’ उनले व्राण्ड तोकेरै भने शिवम् सिमेन्टको कमजोरीका कारण ढलान जमेन । उनले थपे–‘हन्डेड पर्सेन्ट शिवम् सिमेन्टको डिफेक्ट हो ।’ आफ्नो कम्पनीले ७ वर्ष देखि शिवम् सिमेन्ट प्रयोग गर्दै आएको हो यस्तो कहिल्यै भएको थिएन ।
कामदारहरुले रेसियो, केमिकल मिलाएनन् कि भन्ने अर्को प्रश्नमा गुरुङले भने–‘होइन हाम्रो केहि कमजोरी छैन । यदि रेसियो कम बढि भएको भए पनि रेडिमिक्स (सिमेन्ट) त केहि न केहि जमिहाल्थ्यो नि । तर, कति पनि जमेन यो लटको सिमेण्टकै डिफेक्ट छ ।’ हेटौडामा उत्पादति शिवम् सिमेन्टलाई यो बारेमा जानकारी गराई सकेको बताउँदै उनले त्यसको क्षतिपूर्ति शिवम् सिमेन्ट कम्पनीबाटै असुल गरिने पनि बताए ।
प्रकाशित : बिहिबार, असार ०७, २०७५०७:१५
प्रचण्ड सिंगापुर जाँदा ‘रअ’ सँग किन जोडियो नाम ?
सलमानविरुद्ध फेरी अदालतमा मुद्दा दर्ता !
निर्मला हत्याका आरोपीहरु ‘घटना हुँदा कुखुरा चोरीको आरोपमा हिरासतमा थिए’
बस सडकदेखि ३ सय मिटर तल खस्दा १६ जनाको मृत्यु ! मृत्यु हुनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने !
निजी विद्यालयको मनोमानी – सयको झोलालाई हजार !